ब्लास रुइज ग्रू। मोर्स गाथाका लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
ब्लास रुइज ग्रू। मोर्स सागाका लेखकसँग अन्तर्वार्ता
ब्लास रुइज ग्रू उहाँ त्यहाँ एक उत्कृष्ट उदाहरण हुनुहुन्छ जुन एक स्व-प्रकाशित लेखक हो जसले आफ्नो सफलता कायम गर्दै राष्ट्रिय प्रकाशन दृश्यमा उफ्रन्छ। संक्षेपमा, यसले यसको अर्को शीर्षक जारी गर्दछ, गम्भीर हत्यारहरु २, एउटा निबन्ध हो जुन उनले २०१ 2019 मा इतिहासको सबैभन्दा खराब साइकोपाथमा प्रकाशित गरे। तर सबैभन्दा राम्रो ज्ञात सफलता उनको हो मोर्सको गाथा, जो मेकअप गर्दछ झुटो केही छैन, तपाईं चोर्नुहुन्न y तिमी मर्ने छैनौ। यसमा साक्षात्कार हामीलाई सबै कुराको बारेमा एक सानो कुरा बताउँछ। म तपाईलाई धेरै धेरै समय र धन्यवाद मलाई सहयोग गर्न को लागी।
Ic 84 बाट Alicante मा जन्म रफाल, ब्लास रुइज ग्रूले आफ्नो पहिलो उपन्यास स्वयं प्रकाशित गरे, सत्यले तपाईलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ, २०१२ मा। अर्को वर्ष यसको निरन्तरता आयो, पापीहरूको भविष्यवाणी, जुन एक ठूलो बिक्री सफलता थियो। संग क्रिप्टो, यसको तेस्रो शीर्षक, सर्वश्रेष्ठ विक्रेताको दोस्रो स्थितिमा र २०१ 2017 मा राखिएको थियो मार्चको सात दिन, थप यसको प्रक्षेपण आश्वासन। संग कसैलाई केहि पनि नछुनुहोस्!पुलिस र फोरेंसिक प्रक्रियाको मिथक र वास्तविकतामा निबन्ध, आपराधिक अनुसन्धानको मापदण्ड बन्न पुग्यो।
BLAS RUIZ GRAU - साक्षात्कार
BLAS RUIZ GRAU: पहिलो किताब को बारे मा मलाई शंका हो कि यदि यो एक हो भने ट्रोटम्याजिक्स वा को एस्टरिक्स र ओबेलिक्स। जे भए पनि, बच्चाको रूपमा मलाई कमिक्स पढ्न रमाइलो लाग्थ्यो र हरेक हप्ता मैले केहि किनें।
BRG: म साँच्चिकै स्तब्ध भएँ अन्तिम बिरालो। मलाई लाग्छ कि यो पहिलो पटक थियो कि मैले (यस अवस्थामा एक) मुख्य चरित्रको साथ यती धेरै जडान गर्‍यो। मैले सोचें कि तपाईंलाई पढ्ने चिह्न बनाउनको लागि यो कुञ्जी हो।
AL: मनपर्ने लेखक वा लेखकहरू? तपाईं सबै युगहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
BRG: अहिले यो म पागल छ माइकल स्यान्टियागो। मलाई लाग्दैन कि कसैले यसलाई मन पराउँदछ।
AL: तपाइँको सबै उपन्यासहरूको साझा बिन्दु वा विशेषता के हो र तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ पहिलो शीर्षक पछि तपाइँको विकसित भएको छ जुन तपाइँ आफैले प्रकाशित गर्नुभयो?
बीआरजी: मलाई लाग्छ मैले माथि भनेको भनेको हासिल गरें, त्यो पाठकहरु मेरो चरित्र संग कनेक्ट र महसुस र ती जो बाँच्न। म पाठको पनि धेरै ध्यान दिन्छु र हेडफर्स्टबाट के बाहिर आउँदैनन्। म अझै अराजक छु, तर मेरो टाउको दौडिरहेको छ जब म हुँ।
BRG: निरीक्षकलाई अमैया सालाजारडोलोरेस रेन्डोन्डो द्वारा।
BRG: सबै मौन जो गर्न सक्छन्।
BRG: अब यो छ जब तिनीहरूले मलाई छोड्छन्.
BRG: मलाई वास्तवमै मन पर्छ ऐतिहासिक उपन्यास.
BRG: दुबै, पक्कै। यो हामीले सामना गर्ने असाधारण परिस्थितिको कारण सामान्यतया खराब क्षण हो, तर हामीले लेखकहरूलाई यो बुझ्नुपर्दछ कि कामको हिसाबले हामी गुनासो गर्न सक्दैनौं किनकि अब धेरै पढिएको छ।
BRG: स्पष्टसँग गलत। म भन्न चाहन्न कि त्यहाँ संतृप्ति छ, त्यो कहिल्यै होइन, तर यो सत्य हो त्यहाँ पाठकहरू भन्दा बढी लेखकहरू छन्। सबै भन्दा माथि, यस अर्थ मा कि धेरै मात्र आफ्नो संदर्भ लेखकहरु पढ्न चाहान्छन् र अरुलाई थाहा छैन अरुहरुलाई खोल्न गाह्रो लाग्छ। यसले सुरुको लेखकलाई धेरै निराश पार्छ (मलाई थाहा छ, किनकि म पनि यस मार्फत आएको हुँ)।
बीआरजी: यो मेरो लागि गाह्रो हुँदै आएको छ जस्तो कि कसैको लागि छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा यो बुलशिट हो, अरू होइन। काममा म गुनासो गर्न सक्दिन किनभने मैले मेरो काममा तीन गुणा बढाएको छु। हो वास्तवमा, मेरो उपन्यासहरूमा तपाईले कुनै पनि कुरा देख्नु हुने छैन कि कोरोनाभाइरससँग के गर्नु भएको छ न त समान जस्तो केही। मलाई यो किताबमा कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » ब्लास रुइज ग्रू। मोर्स सागाका लेखकसँग अन्तर्वार्ता
मासूम को उमेर